မောင်ဒိုင်း၏ သရော်စာများ: ပြောင်လျှာရှည်တို့ ကတဲ့ဇာတ်
အစိမ်းရောင်ကတ္တီပါကားလိပ်ကြီးပွင့်လာသည်နှင့်လူရွှင်တော် ပြောင်ရှည်၊ လျှာရှည်တို့နှစ်ယောက်၊ လက်အုပ်ကလေးကိုယ်စီချီလို့ထွက် လာကြစေ ..... ။
ရွာစားကျော် စိန်ပတ်ရှည် ရဲ့ ဆိုင်းတို့သံ၊ ညှို့သံလေးအပြီးမှာတော့ .....
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ မြို့မှောင်မှောင် ... (ဆိုင်းအလိုက်သံလေး ..) ၊ မြို့မှောင်မှောင် .... မီးရောင်ဟာခရမ်းချဉ်သီးရယ်တမျှ..၊ ”
လျှာရှည် ။ ။ “ ဆက်ပါဦး ..ပြောင်ရှည်ရေ ..”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ အင်း .. ငတက်ပြားတောင် အပြင်မထွက်ရဲပါဘူး ...တဲ့၊ တို့ပြည်သူတွေခင်မျာ ... ”
လျှာရှည် ။ ။ “ ဟုတ်ပါပြီ .. ပြောင်ရှည်ရေ ... ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ဒို့ပြည်သူတွေခင်မျာ ... (ဆိုင်းအလိုက်သံလေး ..) ၊ ကိုယ့်အီးတောင်ကိုယ်ပြန်လန့်နေရ ..၊ သူမိစ္ဆာ လူဆိုးတွေကြောင့်၊ ဆိုးပါ့ .... ရွှေမြန်မာ ... ဟာ .. ဟာ ..”
လျှာရှည် ။ ။ “ (ဖြောင်း ..) မင်း မဟုတ်တာလျှောက်မပြောနဲ့ .. ပြောင်ရှည်၊ ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ (နတ်သံလေးဖြင့် ..) ဘာမှားလို့လဲ လျှာရှည်ရယ် .. ”
လျှာရှည် ။ ။ “ အဲဒါပြောတာပေါ့ .. ဒို့အစိုးရက .. နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံး၊ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်နေ့မအား၊ ညမအား၊ လျှောက်သွား (အဲ ..) ကြိုးစားနေကြတာမင်းအသိ ...”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ဟုတ်ပါပြီ ခင်ဗျာ .. ယုံလိုက်ပါပြီ ... ”
လျှာရှည် ။ ။ “ ဟုတ်တယ်လေ .. မင်းပြောသလောက်လည်း မဆိုးပါဘူး ..၊ အခုနေရာအနှံ့၊ ဆည်တွေဆောက် ... ၊ လမ်းတွေဖေါက်၊ လယ်တွေပျောက်၊ လူတွေရောက် (နိုင်ငံခြားကို) .. အဲလေ ... အဲ ၊ မင်းအသိ၊ ငါအသိ၊ တရုတ်လည်းအသိ၊ ကုလားလည်းအသိ .. ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ဟုတ်ပါ့မလား .. လျှာရှည်ရဲ့ ..... ”
လျှာရှည် ။ ။ “ တိုးတက်လာတဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ အညီ ... လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုဟာလည်း များလာတာပေါ့ .. ဒါသဘာဝတရား ... ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ အင်း .. ဟုတ်လိမ့်မယ် .. ”
လျှာရှည် ။ ။ “ အဲဒါကြောင့်..ပြည်သူတွေလိုအပ်ချက်အရ ..၂၄ နာရီအပြည့်မီးလင်းစေနိုင်မယ့် ..စီမံကိန်းတစ်ခုကို၊ငါတို့အစိုးရက၀ါ ကျွတ်အမီ လုပ်ဆောင်ကြတော့မယ် ..... ကွ၊ ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ဟုတ်လား .... အားတက်စရာပဲ ..၊ အခုဝါတောင်ကျွတ်ပေါ့ ..”
လျှာရှည် ။ ။ “ ဟုတ်ပ .. မကြာခင် နိုင်ငံတော် အစိုးရက “ဖယောင်းတိုင်နှင့်၊ ဆီမီးခွက် ၀န်ကြီးဌာန ” ဆိုတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအသစ်ကို တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီး၊ ပြည်သူတွေကိုအလင်းဓါတ်မျှဝေတော့မယ် .... ဆိုတဲ့အကြောင်း .. ဒီနေရာကနေ သတင်းကောင်းပါးပါရစေ။ ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ကောင်းလေစွ .. လျှာရှည်ရေ .. ပြည်သူများ လျှပ်စစ်မီး မလာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့ ..၊ အဲဒီ ၀န်ကြီးဌာနကထုတ်လုပ် ရောင်းချပေးမယ့် ၊ ဖယောင်းတိုင်တို့ .. ၊ ဆီမီးခွက်တို့ကို ၀ယ်ယူအားပေးပြီး၊ မီးရအောင်ကြိုးစားကြပါ။ အဓိကက လင်းဖို့ပဲမဟုတ်လား ”
လျှာရှည် ။ ။ “ အခုဆိုရင် မြို့တော်ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ အစရှိတဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာလည်း၊ အထူးလျှပ်စစ်မီးလိုင်းတွေ တိုးချဲ့တပ်ဆင်ပေး ထားပါတယ် .. ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ကြားပါရစေ .. လျှာရှည်ရေ ...... ”
လျှာရှည် ။ ။ “ ဟုတ်ကဲ့ .. ခရမ်းချဉ်သီးလိုင်းနဲ့ ... ပိုးစုန်းကြူးလိုင်းပါခင်ဗျာ .. ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ပြောရင်းနဲ့ .ဖေါက်ဖေါက်လာတယ် .. ကဲ ဒို့ချည်းပဲ မပြီးသေး၊ မင်းသမီးလေးခေါ် မိတ်ဆက်ဦးမှ လျှာရှည်ရေ .. ”
လျှာရှည် ။ ။ “ မင်းပဲ ခေါ်လိုက်ပါ ..ပြောင်ရှည်ရာ ... ငါသူနဲ့ ရန်ဖြစ်ထားလို့ .....၊ ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ဟုတ်လား .. ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲ ..”
လျှာရှည် ။ ။ “မင်းသမီးကွာ ... ဟိုတလောက ဒူဘိုင်း ကပြန်လာတာ၊ ငါ့အတွက်ဆိုပြီး .. ရေနံတစ်ဂါလံယူလာတယ်။ ငါ့နှယ် .. သောက်မရ၊ ရှို့မရ .. ရောင်းစားမရနဲ့၊ မနေ့ကဧည့်စာရင်းလာစစ်လို့ တော်တော်ရှင်းယူလိုက်ရသေး ..... ၊ တရားမ၀င် ဘီအီးအဆီသို လှောင်မှုဆိုပြီး၊ ... အတင်းယူသောက်မယ်လုပ်နေလို့ .. မနဲတားထားရတယ်။ ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ဟုတ်လို့လား လျှာရှည်ရယ် ..... ”
လျှာရှည် ။ ။ “ ဟ ... ဟုတ်တာပေါ့။ ဒီလောက်လေးနဲ့ လျှာရှည်ဆိုတဲ့ .. ငါက လုပ်စားမလားကွ၊ အခွင့်အရေးရမှတော့ .. ဟိုသံအမတ်လို လေယာဉ်စီးလုံးငှား၊ နိုင်ငံခြားမှာ ..... အာမီရမ်နဲ့ ကြွက်သားကင်သွားရောင်းစားမှာပေါ့ ။ ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ကဲ .. ကဲ ထားလိုက်ပါတော့ .. ၊ ငါပဲခေါ်လိုက်ပါ့မယ်။ ကဲ ........ ယောင်္ကျားတကာတို့၊ ဖေါက်ပြား၊ မှောက်မှားစရာ ဖြစ်ရလောက်အောင်၊ မှန်စွာမသွေ၊ လှန်ကာနေတဲ့ (ဆံပင်) သန်တာရှေ ဆိုတဲ့ နှမ ပျိုလေး ..... ရေ ... ။”
စိန်ပတ်ရှည်ဆိုင်းပျိုးသံလေးနဲ့အတူ၊ ကတ္တီပါ ကားလိပ်ကြားမှ မင်းသမီးလေးထွက်လာစေ။ မနှဲလေးနှာစီးသံနဲ့ ..... ။
သန်တာရှည် ။ ။ “ ဒီဘက်က ကိုလျှာရှည်လားရှင် ..... ”
လျှာရှည် ။ ။ “ အမှုတော် ထမ်းလျက်ပါခင်ဗျာ .... သကြားဈေးကြီးလို့ပါ .. ”
သန်တာရှည် ။ ။ “ ဒီဘက်က ကိုပြောင်ရှည်ထင်ပါ့ ..... ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ဟား .. ဟား .. ဒီမှာ မင်းသမီး .. ကျုပ်ကို ကိုပြောင်ရှည်လို့မခေါ်ပါနဲ့ ..... ”
သန်တာရှည် ။ ။ “ အလိုတော် .. ကိုပြောင်ရှည်လို့မခေါ်ရအောင် . ရှင်ကဘာမို့လို့လဲ ..... ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ဟား .. ဟား .. ဟား .. ဟား ၊ မင်းသမီးအခုတော့ မေ့ပြီပေါ့လေကျုပ်ကို.. ။ ကျုပ်နာမည် ၊ ဗိုလ်ပြောင်ရှည် .. တဲ့ ဗိုလ်ပြောင်ရှည် ...... ဟား .. ဟား .. ဟား ။ ”
လျှာရှည် ။ ။ “ ဖြစ်ရလေ ...... ပြောင်ရှည်ရယ် .. ချက်ချင်းကြီးပါလား ... ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ တော် .. တန် .. တိတ် .. ၊ ခင်ဗျားတို့ တိုင်းပြည်အတွက်၊ တံတားတစ်စင်းဆောက်ဖူးသလား၊ ချွေးတစ်စက်ထွက်ဖူး သလား၊ ပြောစမ်း၊ ကျုပ်တို့မှာတော့ လုပ်လိုက်ရတာ၊ အခု (၁၉) နှစ်ပြည့်ပြီ။ ဒီမှာ .. မင်းသမီး .. မင်းနဲ့ ကိုယ်ချစ်ခဲ့ကြတာ .. မင်းမေ့ ပစ်ပြီပေါ့လေ .. ။”
လျှာရှည် ။ ။ “ သြော် ... (၁၉) နှစ်တောင်ကြိုးစားခဲ့ရတာလား .. ကြိုးစား .. ဗိုလ်ပြောင်ရှည်ရေ .... ကိုယ်ကတော့ ဟိုနားလေးမှာ စောင့်နေမယ် ..... ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ (မင်းသမီးရှေ့ ဒူးထောက်ထိုင်ကာ) ...၊ ဒီမှာ မင်းသမီး .. မင်း ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဦးပါကွာ ..၊ ပြင်ဦးလွင်မှာ အရှင် ဦးသခင် အဖြစ်ချစ်ခဲ့တဲ့ မင်းကို သာဝတ္ထိမှာ အသာစွတ်ကြည့်ပြီး၊ အနီးစခန်းမှာ အပြီးကြမ်းခဲ့တာတွေ မေ့ပြီလားဟင် ..... ”
လျှာရှည် ။ ။ “ ဟိုက် ..... ရှားလပါး .... ပြောင်ရှည်ကွ .. ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ဒါပေမယ့် ..... ဒါပေမယ့် ... မန္တလေးမှာ အလှမ်းဝေးလို့၊ ဒို့တတွေ လွမ်းဆွေးခဲ့ကြရသေးတယ်မဟုတ်လား၊ ”
လျှာရှည် ။ ။ “ လုပ်လိုက်ဟ ... အဲဒီအချိန်ဆို .. မင်းသမီး က ကြက်ဆူဆီ အထူးပြု နဲ့ ဓါတုဘွဲ့ရနေလောက်ပြီ .. ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ တစ်ခါ ..... ရန်ကုန်မှာ ပြန်ဆုံလို့၊ ၀ါယာလက်မှာ တစ်ခါ နှက်ကြပြန်တော့၊ မိတ္ထိလာ ရောက်တော့ သိပ်သိသာခဲ့ပြီ မင်း ဗိုက်ကလေးလေ ..... ”
(ဖြောင်း .. ကနဲ သန်တာရှည်ရဲ့ ပါးရိုက်သံ .. )
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ အား .... လုပ်ရက်လိုက်တာ မင်းသမီးရယ် ..... တံတားဦးမှာ .. အစားကျူးခဲ့လို့ ... ပူလာတာပြောတာပါကွယ် .. ”
လျှာရှည် ။ ။ “ တော်သေးတာပေါ့ ..... တံတားဦးကယ်ပေလို့ ..... ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ အင်း ... တံတားဦးမှာ အစားကျူးခဲ့ပေမယ့် .. အခုတော့ ပျော်ရာမှာ မနေ .. ဒေါ်လာတွေရနိုင်တဲ့ .. မော်စကိုမှာ တော်သလိုပဲ သွားနေပါတော့မယ် .. အချစ်ရယ် ... ”
လျှာရှည် ။ ။ “ သွားမယ်ဆိုရင် သတိထား ..... ငတ်တိုင်းလျှောက်မစားနဲ့ .... ဈေးကြီးတယ်တဲ့ ..၊ ထမင်းပြောတာပါ၊ အစာမကြေ ဖြစ်မှာစိုးလို့ ... ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ဒါပေမယ့် .. ကိုယ်မသွားခင်တော့ .. မင်းမိဘတွေနဲ့ .. တွေ့ပြီး ..တောင်းရမ်းလက်ထပ်ယူသွားပါ့မယ်ချစ်ရယ်။ ရ ရင်တော့ .. ကြပ်ပြေးမှာ နှပ်သေးတာပေါ့ ..... ဟင်း .. ဟင်း .. ဟင်း .. ဟင်း .. ”
သန်တာရှည် ။ ။ “ (မျက်လုံးကလေး ဒေါင့်ကပ်ပြီး ..) ဒက်ဒီဘုရားနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင် .. အကို့အနေနဲ့ လေးချက်ချုပ်ရမယ်တဲ့ ..... ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ မင်းဒက်ဒီလုပ်တာ ... လေးချက်မပြောနဲ့ ... အသက်တောင်ထွက်ချင်လွန်းလို့ မနဲ ပြန်ခေါ်ထားရတယ် .... ”
သန်တာရှည် ။ ။ “ ဘာလဲ .. သဘောတူစာချုပ်ကိုပြောတာ ..၊ နံပါတ်(၁) က မီး ကိုချစ်ရင် ထိပ်တိုက်မလုပ်ရဘူးတဲ့ .. ။ ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ သြော် .. မီး .. တဲ့လား ..၊ အင်း .. မီး သိပါတယ် .. ဘယ်တုန်းကဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ဖူးလို့လဲ ..၊ အချိန်တောင်မရခဲ့ကြ ဘူးလေ ..... ကျောင်းတက်နေရလို့ပါ။ ”
သန်တာရှည် ။ ။ “ အင်း .. နံပါတ် (၂) မီးတို့ကို အမျိုးစုံ ဖျက်ဆီးရေးမလုပ်ရဘူး .. ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ကိုယ်ဖျက်တာ .. မီး တစ်ယောက်တည်း .... အဲလေ .... ငါချစ်တာ .မင်းတစ်ယောက်တည်းပါ။ ဘယ်နှယ့်အမျိုးတွေ ဖျက်ဆီးရမှာတုန်း ..... ”
သန်တာရှည် ။ ။ “ နံပါတ် (၃) စီးပွားရေးမပိတ်ဆို့ဘူး ... ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ဘယ်လောက်တောင် ချမ်းသာချင်သေးတုန်း .. ”
သန်တာရှည် ။ ။ “ ကဲပါ အကိုရယ် ... နောက်ထပ် မီးမပြောချင်တော့ပါဘူး ..၊ ပြောလည်းပြော ..မောလည်းမောရပါတယ် .. ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ဟေ ..... ဘာဖြစ်လို့တုန်း ... အကိုတို့ကိုပြောပြပါလား ..... ”
လျှာရှည် ။ ။ “ တစ်နေ့လုပ်မှ တနပ်စားရတဲ့ ဘ၀တွေဆိုတော့ ..... မောတာပေါ့ ..... ”
သန်တာရှည် ။ ။ “ ဟို အရင် အစ .. ပထမကပေါ့လေ ..၊ သူနဲ့ မီး နဲ့က ချစ်သူတွေ၊ အခုတော့ ကွဲပြီပေါ့ရှင် .. ”
လျှာရှည် ။ ။ “ ဟာ ..... ကွဲပြီလား ... ငါကစောင့်နေတာ ..”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ (ဖြောင်း ..) သူများ .. ကွဲ ပြဲတာ .. ၀မ်းသာစရာလား ..၊”
သန်တာရှည် ။ ။ “ မီးရဲ့ ချစ်သူက သားကောင်း စစ်ဗိုလ်ရှင့် .. ”
လျှာရှည် ။ ။ “ သြော် .. သားကောင် စစ်စစ်ကိုး .. ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ (ဖြောင်း .. ) သားကောင်းဟ .. ၊ ဘယ်နှယ့် .. မင်းက တိရိစ္ဆာန်နဲ့ နှိုင်းစရာလား ... ”
လျှာရှည် ။ ။ “ သိဘူးလေ ..၊ စစ်ကြောရေး ကထွက်လာပြီးကတည်းက .. ငါ နားသိပ်မကောင်းတော့ဘူး ..”
သန်တာရှည် ။ ။ “ မီး နဲ့ သူနဲ့ ကအရမ်းချစ်ခဲ့ကြတာ .. ၊ အခုတော့ ကံကြမ္မာမျက်နှာသာမပေးလို့ .. မီးလည်းတွေ့ရာကောက်ယူလိုက် ပါပြီရှင် ...။ ဟော .. အခု ကြည့် .. မီး ကတဲ့ ပွဲတိုင်း ..၊ သူ .. တိတ်တိတ်ပုန်း လာကြည့်နေတယ်။ ”
လျှာရှည် ။ ။ “ ဟုတ်လား .. ဒါဆို ပြောလိုက် မင်းသမီး .. ။ ကိုကိုရယ်၊ ကိုကိုရယ် ..၊ ပုန်း ..... ပုန်း ကြည့်မနေနဲ့ ..။”
သန်တာရှည် ။ ။ “ ကိုကိုရယ်၊ ကိုကိုရယ် ..၊ ပုန်းပုန်းကြည့်မနေနဲ့ ..။”
လျှာရှည် ။ ။ “ ကိုကို ပုန်းကြည့်နေတာ ၊ ဓါတ်ဆီခိုးမလို့လား ... ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ (ဖြောင်း .. ) ..၊ ခိုးစရာမလိုဘူး၊ သူတို့က ပီပါလိုက်မနေကြတာ ..”
သန်တာရှည် ။ ။ “ ကဲ .. တော်ကြပါတော့ရှင် .. ပြောရဦးမယ်။ ကိုကိုက အရမ်းစွန့်စားရဲတာ၊ ရှေ့တန်းထွက်ခါနီးဆို ..၊ မီးဆီ အရင် လာပြီး .. သူရဲ့ သတ္တိ ဘယ်လောက်ရှိကြောင်း .. လာလာပြောတာ ..။ ”
လျှာရှည် ။ ။ “ ပြောင်ရှည်နဲ့တော့ .. ကွာပါ့ကွာ ..၊ သူကဘယ်လိုလာလာပြောလဲ .. ”
သန်တာရှည် ။ ။ “ တပ်ပြေးပြီး .. လာတောင်းမယ်နော် .. တဲ့ ။ ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ရဲစွမ်းတာ .. ရဲစွမ်း တာ .. ”
သန်တာရှည် ။ ။ “ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် .. ပြည့်စစ်သားဟာ ...၊ အမှန်တော့ ပြည်ချစ်သားဖြစ်ရမယ် မဟုတ်လား .. အကိုတို့ရယ်။ ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ မှန်တာပေါ့ညီမရယ် ..”
လျှာရှည် ။ ။ “ ကြားရတာ ... အားရှိပါပေ့၊ မှန်ပါပေ့ မင်းသမီးရယ် ။ ”
သန်တာရှည် ။ ။ “ အခုလိုသာ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လေ ..၊ နောင်တခေတ်မှာ ..၊ ဟိုသီချင်းဟာ ၊ ဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ် အကိုတို့ရေ .. ၊ လမ်းမှားကနေ၊ လမ်းမှန်သွားဖို့ဆိုတာ၊ လာချင်ရင်အနီးကလေး၊ မလာချင်ရင်သာ အဝေးကြီး ဖြစ်နေရတာ မဟုတ်ပါလားရှင် ..။ ”
ပြောင်ရှည်+လျှာရှည် ။ ။ “ မှန်လိုက်လေ .. ညီမရယ် .. ။ ”
သန်တာရှည် ။ ။ “ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် .. ၊ အဲဒါကြောင့် ညီမရဲ့ ချစ်သူကို သီချင်းလေးဆိုပြီး .. အခုလိုပြောလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင် .. ”
ပြောင်ရှည် ။ ။ “ ကြားပါရစေ ဗျာ ...... ”
ဗိမ္မသာရဇာတ်ကားရဲ့ ..၊ ဇာတ်ဝင်တေးတစ်ပုဒ်အတိုင်း၊ ..... ဆိုင်းသံနွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းထွက်ပေါ်လာစေ၊
သန်တာရှည် ။ ။ “ ရှေး လွန်လေပြီးသောအခါ .....၊ နေပြည်တော် တိုင်းမဟာ၊ .... အာဏာရှင်အစိုးရ .. သူသတ်သမားတွေဟာ ....၊
သာသနာကို ဖျက်မဲ့ သားလို့၊ ပုဏ္ဏားတော်များ ဟောကြားခဲ့တာ ၊ ဖခင် ကိုအောင်ဆန်းမှာ .. မကြားလိုပါ၊ မကြားလိုပါ၊ စစ်သားဆိုတာ ပြည်သူ့အတွက်မို့ .... အမှန်တရားတွေကိုသာ ..... အကြိမ်ကြိမ် .. မိန့်ကြားခဲ့လေတာ ..... ။ ”
တီးလုံးတစ်ကျော့ပြန်လို့ ၊ မင်းသမီးဟန်က .. ကိန္နရီမလေး အလား ....
Non-Stop စတိုင်ဖြင့် စိန်ပတ်ရှည် ကိုယ်တိုင်ရေး တေးတစ်ပုဒ်ဖြင့် ဆက်လက်ဖျော်ဖြေစေ ..... ။
“ အခုတော့ တစ်ခါ၊ တုမရပါ၊ ..... သာသနာရောင်ဝါ လွှမ်းတဲ့၊ တို့မြန်မာ ၊ အလင်္ကာပန်းဝတ်ရည်များ၊ စုပေါင်းညီညာ၊ ပြည်သာယာအစဉ်ရေး.....၊ ရှေးရှုတော့မှာ ..၊ တင့်တယ်ကာလေ ..ညီညာ၊ ၀င့်ထည့်ကာလေ ..၊ ကမ္ဘာမှာ....၊
မြန်မာဆိုတို့အမျိုး..၊ အောင်စည်အောင်မောင်း၊ အောင်ကြောင်းရယ်ဖြာ .....။ (ဟေ့ .....) မင်းသမီး ဒိုးချက်ခေါ်သံနဲ့အတူ။
ပြောင်ရှည်၊ ရွာစားကျော် ဒိုးချက်နဲ့ အညီ ကနေလိုက်တာများ ...၊ ဇာတိမာန်တက်ကြွလိုက်တာဗျာ .....။
ဆိုင်း... က ပိုသွက်လို့ Key ချိန်းကာ မင်းသမီး ဆက်ဆို ....။
“ တအူတုံဆင်း .. သွေးချင်းတွေရေ ..... (ဗျာ .. ဗျာ .. )
ကမ္ဘာတည်သရွေ့ .. ပေါင်းစည်းမယ်လေ ..၊ ..
မေတ္တာကို အစဉ်သာထား ..၊ အလင်းဆီမှလေ ..၊
မေ ချစ်သောသူ ၊ ပြည်စစ်သား၊ လိုက်ခဲ့ပါလေ ..... ။ ”
လျှာရှည်ရဲ့ ဟစ်ဟော့ စတိုင် .. စ၀င်စေ ..... ။
“ မင်းတို့ရက်စက်မှုက ဘယ်သူ့အတွက်လဲ ..၊
မှားနေပြီ ..... ကိုယ်လူတို့၊ မုန်းနေပြီ ... ပြည်သူတို့ ...၊
လက်တဆုပ်စာသာ၊ မင်းတို့အထက်မှာ ..၊
ချမ်းသာတာ၊ သူတို့အတွက်ပါ ..၊
ဆင်းရဲနေတာ၊ မင်းတို့တွေပဲ ..၊
မင်းတို့မှာ .. တာဝန်ရှိတယ် ..၊
မင်းတို့သာ ဒါရိုက်တာပဲ ..၊
မင်းတို့တွေသာ ဇာတ်ဆရာပဲ ..၊
လိုက်ခဲ့ .. လိုက်ခဲ့ .. လိုက်ခဲ့ .. လိုက်ခဲ့ .. ။ ”
မေ ချစ်သောသူ ၊ ပြည်စစ်သား၊ လိုက်ခဲ့ပါတော့လေ ..... ။ ”
သီချင်းသံမှိန်ဖျော့၊ အလင်းဟာတိမ်လျော့သွားတာနဲ့အတူ၊ ကတ္တီပါကားလိပ်ကြီး တဖြေးဖြေးကျလာစေ ။ ။
Posted by dms at 5:29 AM
Good!!......Our spirit that love justice never die!!!!......They will be afraid everything, everywhere and everytime about our real justice. Therefore, their lie are bigger and bigger....Finally they will get their desire to their place as "Tay Pyi Taw".....